Mikitikitika tsikelikely Andriamanitra ! – MyDago.com aime Madagascar
Mikitikitika tsikelikely Andriamanitra !
Tamin’ny hetsika teo amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany dia niavaka ny kabary rehetra heno teo.
Ny filohan’ny AMM, Andriamatoa Guy Maxime dia nanambara ny mampiavaka sy mahasamihafa ny FAT sy ny ankolafy telo, isika hoy izy dia afaka mirehareha fa manana filoha hendry mihoatra ny FAT.
Nanipy teny ihany koa izy mahakasika ny fivoriana tetsy Ivato nataon’ny raiamandreny mijoro.
Manana ny maha izy azy izany mpitandrina izany, manaraka “dogme” ary tsy tokony hitenintena foana mihitsy, nianatra aman-taona maro ary tsy tokony voavidim-bola satria olon’ Andriamanitra. Tsy amin’izao farany izao ianareo vao hiteny fa manana vahaolana ry raiamandreny mijoro, na ny CNOSC koa aza mbola misy lesona ara-teknika ka mila amboarina .
Ny fizirizirianareo no maha potika ny firenena ary mbola miandry inona tokoa ianareo vao hahatsapa tena. Aza manararao-paty, mandamidamina saina sy fom-bahoaka eo ianareo hoy hatrany Ralaiseheno.
Ny solombavambahoaka voafidy tany Vavatenina kosa indray dia nilaza fa mila ny any ivelany foana isika na hivarotra andramena fotsiny aza. Tsy ilaina ve ny fankatoavana iraisam-pirenena dia nakany ivelany i Vital? Nahazo fiantsoana maika tany ny lehilahy.
Mety mandimandina ianao androany dia tsy mahatsiaro ny vahoaka Malagasy nefa ao anatinareo ao dia dimy na enina sisa no miziriziry ny tsy hiverenan’i Ravalomanana. Mety tsy mitovy fijery amin’ny rehetra aho fa misaotra ny Tompo nampisy ny krizy nahafantarana zavatra maro ary indrindra ny toetran’ny olona hoy hatrany I Zafilahy.
Tsy maintsy amboarintsika ny zavatra tsy nety rehetra tamin’ny tafika hoy I Zafilahy Stanislas namarana ny kabariny.
I Mektoub kosa dia nanamafy fa ny tsiparifary no tsy mapandroso ity firenena ity. Tsy fon’olombelona intsony fa manao fisainana biby ny mpanao politika sasany. Diso ianareo ary ny Tompo mihitsy no nampiteny ireny V6 ireny. Ireo mbola ao anatin’ny FAT ireo no neverin’ny frantsay fa ho “leaders politiques” nefa diso hevitra izy ireo. Zatra mpilelaka ireo toan’ i Marson Evariste. Tsy adala ny Amerikana milaza fa tsy ara-dalana io FAT io satria ny ao ambadikany dia miaramila daholo.
Tsy hoe mamerina ny lasa fa iza moa no namotika ity Madagasikara ity? tamin’ny andro iray indrindra fa ireto toerana ireto? Ny fahefana nalaina an-kery tsy maharitra ary tandremo ny latsa avy any ambony satria feom-bahoaka dia feon’Andriamanitra. Mikitikitika tsikelikely Andriamanitra. Isika anefa sady tsy faly ary tsy miady amam-paty.
Miteny I Gal Fidy, hoy hatrany Mektoub fa misy mpanolontsaina tsy mamely ao Ambohitsirohitra, efa ireo ihany no tao hatrizay ary mivadimbadika hatrany. Rehefa nanota ianao dia aza hailika any amin’ny hafa ny heloka.Nanao tsipi-tenyihany koa izy hoe : ”rehefa mitondra i Ravalomanana, miverina daholo ny mpamatsy vola.”
Sitrak’ Andriamanitra ny fodian’ny filoha Ravalomanana hoy ny HMF !
Antsonjombe – Andriamanitra ô, avereno ny dadanay !
Inona no sitrapon Andriamanitra ho an i Dago
Auteur Solo Razafy*Publié le 30 août 2011 30 août 2011 Catégories Politique
Précédent Article précédent : À chacun son « impartialité »
Suivant Article suivant : Tsy tokony ho voavidim-bola ny mpitandrina .